Ama-biogas akhiqizwa ngemfucumfucu yezitshalo | Ukuvuselelwa Okuhlaza
IsiJalimane Portillo | | I-Biogas
Namuhla kunezindlela eziningi zokukhiqiza amandla ngodoti wazo zonke izinhlobo. Ukusetshenziswa kukadoti njengezinsizakusebenza ukukhiqiza amandla kuyindlela enhle yokonga ezintweni zokusetshenziswa futhi kusize ukuqeda ukuncika kumandla okubasa.
Ubhekilanga waseMexico uthathwa njengesitshalo esihlaselayo ezindaweni ezahlukahlukene zase-Afrika, e-Australia, nakwezinye iziqhingi ezisePacific Ocean. Yebo, abacwaningi abavela emanyuvesi amabili aseNigeria bebelokhu besebenza ocwaningweni oluthuthukisayo ukukhiqizwa kwe-biogas nokwenza ngcono ukusebenza kahle kwendle epulazini yezinkukhu kanye nalezi zelanga zika-sunflies.
1 Khiqiza ama-biogas futhi wandise ukusebenza kahle
2 Ukusebenza kahle okukhulu nge-pre-treatment
Khiqiza ama-biogas futhi wandise ukusebenza kahle
Ukukhiqiza ama-biogas avela endle yezinkukhu zase-Mexico kanye nobhekilanga kungumbono omuhle, ngoba sigcina sinezinkinga ezimbili ezinkulu: ukwelashwa kwezinsalela zasepulazini kanye nosongo ezinhlotsheni zomdabu ezibangelwe ubhekilanga waseMexico. Phambilini, eNigeria naseChina, kwenziwa ucwaningo lokusebenzisa le biogas. Umqondo wukuqeda ukuhlasela kwalesi sitshalo ezindaweni lapho sithatha khona izimbali zomdabu ngoba bobabili abacwaningi baseyunivesithi kanye neqembu elikhethekile le-IUCN (International Union for Conservation of Nature) ezinhlotsheni ezihlaselayo ziveza ukuthi ubhekilanga uyingozi kakhulu kwezinye ezivikelekile izindawo zemvelo.
INigeria ingelinye lamazwe athinteke kakhulu kulesi sitshalo yingakho ingayeki ukufuna ezinye izindlela zokuvimba ukunwetshwa kwayo. Ngaphezu kwalokho, abazami nje kuphela ukuqeda lesi sitshalo kodwa futhi bazama nokusebenzisa udoti waso. Ucwaningo olwenziwe amanyuvesi aseLandmark and Covenant, olushicilelwe kulo magazini Amandla Namandla, kukhombisa ukuthi izinsalela zalobhekilanga zisebenza kahle kakhulu ekukhiqizeni ama-biogas. Lokhu kwenzeka ngenxa yokuhlanganiswa kokugaya ubhekilanga waseMexico nezinsalela zepulazi lezinkukhu nokwelashwa kwangaphambilini.
Ukusebenza kahle okukhulu nge-pre-treatment
Kunezindlela eziningi zokukhiqiza ama-biogas. Ama-biogas angasetshenziselwa ukukhiqiza amandla ngoba anenani eliphakeme lekhalori. Ucwaningo luphenye ukwelashwa kwangaphambili kwezinkukhu nezinsalela zikabhekilanga waseMexico ukuze ukwandisa isivuno ekukhiqizeni i-biogas ngaphezu kuka-50%. Iziphetho zocwaningo zikhombise ukwanda kwama-54,44% esivuno se-biogas esivela ekuhlolweni lapho kwenziwa khona ukwelashwa kwangaphambilini futhi kwaqhathaniswa nalokho okwakungakaze kwelashwe ngaphambilini.
Ukuthola ukuthi ukusebenza kahle kuhlanganisa amandla asetshenziswe ekwelashweni kwangaphambili, kwenziwa ibhalansi yamandla. Kubhalansi yamandla, kufundwa amandla angena ohlelweni, kanye nalokho okudingekayo kuzo zonke izinqubo zokukhiqiza i-biogas, namandla ashiya uhlelo nawo ayalinganiswa. Ngale ndlela, unokulawula okuphelele ekukhiqizweni nasekusebenziseni amandla ngaso sonke isikhathi.
Yebo, kubhalansi yamandla eyenziwayo, kwabonwa lokho amandla we-net ayenamandla futhi kwanele ukukhokhela ngokwanele amandla ezishisayo nagesi asetshenziselwe ukwenza ukwelashwa kwangaphambili kwe-thermo-alkaline.
Khumbula ukuthi ubulongwe bezinkukhu bungaqukatha izakhamzimba, ama-hormone, ama-antibiotics kanye nezinsimbi ezisindayo ehlanjululwa emhlabathini nasemanzini. Konke lokhu kungangcolisa inhlabathi namanzi lapho kukhishelwa khona. Kungakho ukusetshenziswa kwalezi zindle ekukhiqizweni kwama-biogas kufaneleke ngokuphelele, yize kuqashelwa ukuthi ngokwabo akusizi ukuziguqula zibe yi-biogas. Ukuze zisebenze kahle, kufanele zixutshwe nezinto zokusetshenziswa zemifino njengobhekilanga waseMexico.
Okokugcina, kukhona nezinye izitshalo ezihlaselayo kwamanye amazwe afana neMexico noma iTaiwan lapho bahlela ukuziguqula zibe ngama-biofuels afana ne-ethanol futhi zisetshenziselwa ukutadisha ukusetshenziswa kwe-biomethane.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Ama-biofuels » I-Biogas » Ama-biogas akhiqizwa ngezinsalela zezitshalo ezihlaselayo
Kuye kwaba usizo olukhulu.Isintu sintula isiko lemvelo.Ngiyabonga
Amandla avuselelekayo eYurophu anjani?